मेरो विजयी भएमा सिमानामा काँडेतारको अभियानले पुर्णता पाउने छ -खड्का – NQKhabar
प्रकाशित मिति: ४ मंसिर २०७४, सोमबार १६:१५
खोटाङ जिल्लाको साविकको सिम्पानी ८ हाल खोटेहाङ गाउँपालिका ८ मा जन्मेर लामो समय नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा नायक तथा निर्माताका रुपमा स्थापित अभिनेता नवल खड्का अब अभिनेता मात्र होइनन् । उनी नेता समेत बनिसकेका छन् । उनलाई यस पटकको आवाधिक निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले प्रदेश नम्बर १ को समानुपातिक उम्मेदवार बनाएसँगै उनी रिलको मात्र होइन रियल नेताको रुपमा खोटाङ जिल्लाको गाउँगाउँमा भोट माग्न पुगेका छन् । उनले नेपाली राजनीतिमा आवश्यक सुधारको खाँचो रहेको बताउँदै देशभक्ति पूर्ण भावना बिस्तारै ओझेलमा पर्दै आएको बेला आफू एक सक्षम युवाका रुपमा देशको स्वभिमानलाई उच्च बनाउन समृद्ध नेपालको निर्माणका लागि विभिन्न किसिमका अभियानका अभियानकर्ताका रुपमा समेत आफूलाई चिनाउँदै आएका छन् । उनको यस पटकको चुनावी अभियानमा के कस्ता अनुभव रहेका छन् भन्ने बारेमा पत्रकार भीम राईले खोटाङको सिम्पानीमा पुगेर गरेको कुराकानी ।
१, निकै पछि जन्मभूमि फिर्नुभएको छ । कस्तो अनुभूति गर्दै हुनुहुन्छ ?
एकदमै प्रफुल्लित भएको छु । म यहाँ नआएको निकै समय भएको थियो । तर, मैले पढेको स्कूल, खेलेको मैदान, मेरा बुबाआमाले डो¥याउँदै हिँडाएको माटोमा आज मलाई गौरव लागेको छ । यस मानेमा कि म आज हिजोको नवल नभएर एक चलचित्रको अभियान्ता, नायक निर्माता मात्र होइन उम्मेदवार नवल खड्काका रुपमा उभिन पाउँदा मेरो माटोलाई शिरमा राखेर सलाम गर्न मन लागि रहेको छ ।
२, तपाई चलचित्र क्षेत्रको स्थापित मान्छे अहिले फरक भूमिकामा हुनुहुन्छ के कसरी यो सम्भवाना जु¥यो ?
हो म एकदमै मेरो क्षेत्र भन्दा फरक पाटोमा आएको छु । जुन मेरो पेशा व्यवसाय भन्दा पृथक जस्तो देखिन्छ । तर, यसो भनिरहँदा म राजनीति भन्दा पृथक नै थिएँ भन्ने चाँही होइन । मैले पढेको सिम्पानी मावि (हाल सिम्पानी क्याम्पस)मा २०४७÷०४८ सालमा म अनेरास्ववियुको प्राक अध्यक्ष भएर काम गरिसकेको छु । मेरा समकालीन साथीहरु अहिले पनि यतै हुनुहुन्छ । राम दंगाल जी, महेश खड्का लगायतका साथीहरुसँगै मैले मेरो विद्यार्थी राजनीति शुरु गरेको थिएँ । पछिल्लो समयमा समयक्रमसँगै व्यवसायिक हिसाबले रंगीन दुनियाँमा छिरियो । गाउँबाट हिँड्दा जसरी आमाबाबाले रंगिन सपना सजाएर मलाई यही गाउँबाट विधाइ दिनुभएको थियो । त्यो पूरा गर्नेक्रममा फरक ठाउँमा फरक पहिचान बनाइएको मात्र हो । जहाँसम्म यो अवसरको कुरा छ । मैले गरेका हरेक कामहरुबाट प्रभावित भएरै होला मलाई नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले समानुपातिक कोटामा राखेर मेरो प्रतिभालाई सम्मान गरेकाले यो सम्भव भएको हो ।
३, माओवादी केन्द्रले तपाईलाई नै उम्मेदवार किन बनायो ?
प्रश्न जटिल छ । बुझ्न जरुरी छ । म शुरु देखिनै वामपन्थी विचार राख्ने मान्छे हुँ । पछिल्लो समयमा मैले समाजलाई बुझ्ने क्रममा सिङ्गो नेपाल आमामाथि भइरहेको अन्याय र अत्यचारको बारेमा थाहा पाँए । म मेरो देशको चिन्तामा डुब्न थाँले । नेपाल आफैमा स्वाधिन मूलुक भएपनि पटकपटक सिमाना मिचिने, राजनीतिक सामाजिक आर्थिक सबैखाले कुरामा छिमेकीले बारम्बार हेप्ने गरेको टुलु टुलु हेरेर बस्न नसक्ने भएकाले होला मैले मेरो क्षेत्रबाट त्यस्तै किसिमका राष्ट्रीयता, जनजीवीका, सवाल समाज सेवाको कार्यहरु संचालन गर्न थाँले, चलचित्रको माध्यमबाट सचेतना फैलाउने काममा लाग्न थाँले । जनयुद्धको कथामा जोडेर आवाज भन्ने नेपाली चलचित्र निर्माण गरेँ, नेपाली भुमीमा विदेशीको हस्तक्षेप सहन नसक्दा दशगजा भन्ने फिल्म बनाए, नेपालकै पश्चिमी जिल्ला डढेल्धुरामा रहेका क्रान्तिका नायक भिमदत्तको जीवनमा आधारित ऐतिहासिक चलचित्र निर्माण गरेर राज्यलाई शहिद घोषणा गराउन पहल गरेँ, यी र यस्तै कामका कारण होला मलाई नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले नीति निर्माण तहमा समेत मेरो आवश्यकता महशुस ग¥यो होला र मलाई यस पटक टिकट दियो ।
४, उम्मेदवार बन्नु भएको छ । गाउँगाउँ पनि घुम्नु भयो ? अवस्था कस्तो पाउनुभयो ?
हजुर म गाउँगाउँमा पुगेको छु । अहिले पहिलेको भन्दा गाउँ निकै सचेत रहेको मैले पाएँ । म जहाँ गएको छु त्यहाँको राम्रो रेसपोन्स पाएको छु । यस पटक नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को साझा गठबन्दन भएकाले पनि नागरिकहरु निकै उत्साहित हुनुहुन्छ । उहाँहरु यसपटक वाम गठबन्धनलाई जुनसुकै हालतमा विजयी बनाउने अभियानमा रहनुभएको छ । सबै गाउँ गाउँमा विजयी सुनिश्चित भएको खबर पाएको छु । बाँकी कसरी बढी भन्दा बढी मतान्तरले जित्ने भन्ने मात्र हो ।
५, तपाई १ नम्बर प्रदेशको समानुपातिक तर्फको उम्मेदवार भएकाले तँपाईको चुनावि एजेण्डा के के हुन ?
म आम सर्वसाधरण जनता जस्तै एक व्यक्ति हुँ तर फरक म मा राष्ट्रवादी चिन्तन छ । मैले समानुपातिक तर्फको उम्मेदवार भइरहँदा १ नम्बर प्रदेशका १४ वटा जिल्लाबाट मलाई भोट प्राप्त हुनेछ । मैले पाउने भोटलाई मैले मेरै क्षेत्रका हितमा सदुपयोग गर्नुपर्छ । मेरो एजेण्डाको हकमा सबै भन्दा पहिले त नेपाली जनताको आर्थिक समृद्धी हो । आत्मनिर्भर समाजको विकास गर्दै स्वाधिन राज्यको नागरिकका हिसाबले बाँच्न पाउनुपर्ने सामाजिक हक मेरो मुल एजेण्डा हुने छ । मैले माथी पनि भनेको छु मैले राष्ट्रियताको सवालमा काम गर्दा सिमा मिचिएको विषयमा चलचित्र दशगजा निर्माण गरेको थिएँ । तर राज्य विभेदकारी हुँदा त्यो मेरो चलचित्रलाई सरकारले प्रशारण गर्न दिएन । प्रशारण स्विकृत लिन मैले निकै लामो पापड बेल्नुप¥यो । यतिसम्म कि भारतीय दुतावासले त्यो चलचित्र रोक्न मलाई पाँच करोड रुपैँया दिएर किन्न खोज्यो । मैले त्यसबेला भनेको थिएँ । मलाई पाँच करोड दिएर फकाउने तर नेपाली करिब तीन करोड नागरिकहरुमाथि थिचोमिचो गरिरहने हो भने, मलाई स्वीकार्य छैन । त्यही भएपछि पाँच पटक सेन्सर गरेपछि बल्लबल्ल दशगजा प्रशारणको अनुमती लिएर प्रशारण गरेको थिएँ । हो यो पीडालाई निर्मुल पार्नका लागि मैले सिमानामा काँडेतारको अभियान सञ्चालन गर्ने अठोट गरेको छु । मेरो विजय भएमा नीतिगत रुपमा राज्यको पहलमा त्यो काम अगाडि बढ्ने छ । यदि विजयी नभएमा पनि जनताको बलमा चाहे त्यो पाँच किलो मिटर नै किन नहोस यो कामको सुरुवात गरिने छ ।
अर्को म आफू चलचित्र उद्योगमा रहेको हुँदा मैले खोटाङ जिल्लाको हकमा राम्रो प्रकारको फिल्मी सिटिको विकास गर्ने सपना देखेको छु । जुन नेपाली चलचित्रका लागि मात्र होइन विदेशी चलचित्रको सुटिङ स्पोर्टका रुपमा यस जिल्लालाई विकास गर्न सकिन्छ । जसले आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटनको प्रर्वद्धन गर्न सकिने छ । यस्तै मरो क्षेत्र कला सँगीतसँग जोडिएको क्षेत्र हो । साथै खोटाङ जिल्ला कला सँगीतको उर्वर भूमि पनि हो । यसलाई संरक्षण संर्वद्धन गर्दै यहाँको पुराना तथा नया सम्पूर्ण स्रष्ठाहरुको सम्मान गर्दै खोटाङमै एक उत्कृष्ट सँगीत विद्यालय सँचालन गर्दै यहाँका हरेक प्रतिभालाई प्रोत्साहान गर्ने मेरो लक्ष्य रहेको छ । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा बिरामीलाई अकालको मृत्युबाट जोगाउन गाउँगाउँमै सुविधा सम्पन्न अस्पतालहरु बनाउनुपर्ने छ । त्यो हामी वाम गठबन्दनको विजयले मात्र सुनिश्चित गर्ने छ । यी यस्ता निकै सपनाहरु देश र जनताको बीचमा खाँचो छ । हामी परमिनर्भरतामा अलमलिरहेको ठाउँमा स्वनिर्भर बन्न यहाँको अर्गानिक खेती प्रणालीको प्रोत्साहन जरुरी छ ।
६, अन्त्यमा आम खोटाङ्गे मतदाताहरुलाई के सन्देश दिनुहुन्छ ?
सबै भन्दा अगाडि त यो अवसर दिनुभएकामा तपाई र तपाईको सञ्चार माध्यमलाई धन्यवाद । म मेरा सम्पूर्ण आमाबाबा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरु, मेरा इष्टमित्र नरनाताहरु सबैमा म खोटाङको माटोमा जन्मेको एक युवा तपाईको भाइ छोरा नै हो । मेरो सपना आफू सम्पन्न हुने भन्दा बढी समाजलाई सम्पन्न र सुखी बनाउनुपर्छ भन्ने हो । हामी सबै मिलेर अगाडि बढे लक्ष्यमा चाँडै पुगिन्छ । त्यसैले गर्दा यस पटकको निर्वाचनमा प्रदेशसभाको समानुपातिक तर्फ गोलाकार भित्रको हँसिया हथौडा चुनाव चिन्हमा मलाई अमुल्य मतदान गरिदिनु हुुन सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछु । धन्यवाद